Gor-gortankii Hishiiska Biyaha Wabiga Niilka Oo Guuldaraystay Markale – Heemaal News Network
Ciidamada Danab Iyo Daraawiishta Oo Howlgal ka Fuliyay Deegaano ku Dhaw Jamaame.(Sawirro)
Madaxwayne Geelaha Jabuuti Oo Xafiiskiisa ku Qaabilay Madaxwaynaha Puntland.(Sawiro)
Wasiirkii Ugu Tunka Waynaa Xukuumadii Riyaale Oo Maanta ka Hadlay Arimo Xaasaasi ah.
Maraykanka Oo War kasoo Saaray Wariye Dhawaan Lagu Dilay Afgooye.
Somaliland Oo Go’aan Adag kasoo Saartay Sarifka Online-ka Ee Forex.(Akhriso)
Gor-gortankii Hishiiska Biyaha Wabiga Niilka Oo Guuldaraystay Markale
Waxa guuldaraystay dedaalo kama dambays ah oo la doonayay in qalinka loogu duugo heshiis kama dambayn ah oo soo afjara xiisada biyaha wabiga niilka.
Dalalka Masar, Itoobiya iyo Suudaan ayaa ku kala kacay miiska wada hadalada kaddib markay ku guuldarreysteen inay gaaraan heshiis ku aadan sida loo buuxinayo biyo xidheenka Itooobiya ay dhisatay iyo sida uu u shaqaynayo biyo xidheenkan korantada laga dhalinayo oo ah kan ugu weyn Afrika ee laga dhisayo wabiga Nile.
Safiirka Itoobiya u fadhiya Mareykanka Fitsum Arega ayaa bartiisa twitterka ku soo qoray in wada hadaladii ugu dambeeyay ee Washingtonka qabsoomay shalay Khamiistii ee ay wada yeesheen wasiirada biyaha seddexda wadan ay ku dhamaadeen fashilaad wax heshiis ahna aanan la gaadhin.
Safiirka ma uusan cadeynin sababta keentay in ay wada hadaladu guuldaraystaan.
Saddexda waddan ayaa bishii hore ku heshiiyay heshiis horudhac ah, ka dib wadahadalo ay dhexdhexaadiyeen Mareykanka iyo Bangiga Adduunka, heshiiskaas oo qeexayay in biyo xidheenkan Ethiopia ee lagu magacaabo Grand Renaissance Dam la buuxiyo inta lagu jiro xilli roobaadka, balse gorgortan dheeraad ah in laga sameeyo sanadaha iyo bilaha la buuxinayo ayaa loo baahnaa ka hor inta aanan heshiiska kama dambaysta ah la dhammaystirin bishan gudaheeda.
Itoobiya, oo dhisaysa biyo-xireenka, waxay dooneysaa inay sida ugu dhakhsaha badan u buuxiso una bilawdo dhalinta korontada, dhaqsahaas ayaana ahaa midka ay masar ka biyo diidanayd.
Dhinaca kale Masar waxay ka walaacsan tahay in waqtiga kooban ee ay Ethiopia doonayso inay ku buuxiso biyo-xireenku ay saamayn ku yeelato nolosha dadkeeda oo wax ka badan sagaashan bobolkiba ay ku tiirsan yihiin qulqulka biyaha wabiga Niilka.
Wariye Fadxiye Laki Oo Warbixin ka Diyaarisay Magalada Borama.
QM Oo Ka Digtay Macaluul Soo Food-saarta Dalalka Bariga Africa Dhawaan